Waftiga Puntland uga qayb galaya shirka wadatashiga Somalida oo lagu soo dhaweeyey Muqdisho. – Radio Daljir
Waftiga Puntland uga qayb galaya shirka wadatashiga Somalida oo lagu soo dhaweeyey Muqdisho.
Muqdisho, Sept 03 – Wafti balaaran oo ka kooban golayaasha dawlada Puntland, kana qayb gali doona shirka wadatashiga Somalida ee 4-ta bisha furmi doona ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Muqisho.
Waftiga oo ka kooban 25 xubnood oo sagaal (9) ka mid ah ay yihiin mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland, ayaa waxaa hogaaminaya ku xigeenka afhayeenka baarlamaanka Puntland Md. Xuseen Yaasiin X. Diriye.
Waftiga ayaa waxaa ka mid ah wasiirada waxbarashda, qorshaynta, haweenka, iyo hawlaha guud ee Puntland; wasiir ku xigeenada caafimaadka, kalluumaysiga, ganacsiga & duuliskta aya sidoo kale ka mid ah waftiga; wasiir al dawlayaasha sharicga & amniga ayaa iyana ka mid ah waftiga.
Waa waftigii ugu balaaraa ee Puntland ay u dirto shir lagu gorfaynayo arrimaha Somalida, aan ka ahayn shirkii Eldoret, Kenya ee lagu dhisay dawlada federaalka ah sannadkii 2004-tii.
Shirka ayaa socon doona 4-ta illaa 6-da bisha Sebtembar, 2011.
Waftiga Puntland uga qaybgalaya shirka wadatashiga Somalida oo ka dhoofay Garowe.
Garowe, Sept 02 – Wafti ka kooban 25 xubnood oo isugu jira labada gole ee dawlada Puntland ayaa maanta ka duulay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe si ay uga qaybgalaan shirka wadatashiga oo lagu wado inuu 04-ta bisha ka furmo magaalada Muqdisho.
Wafiga oo abaara kawdii duhurnimo ka duulay garoonka ayaa waxaa saxaafada uga warbixiyey ujeedada safarkooda wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdi Faarax Juxa oo sheegay in ay ku wajahan yihiin ka qaybgalka shirka wadatashiga Soomaliya oo bari lagu wado inu ka furmo magaalada Muqdisho.
Wafti kale oo uu hogaaminayo M/weynaha Puntland Dr. C/raxmaan Sh. Maxamed Faroole ayaa lagu wadaa in uu saacadaha soo socda u duuli doonaan isla Muqdisho.
Dawladda federaalka ah iyo Puntland ayaa todabaadkii hore ku kala saxiixday heshiis ka kooban 13 qodob caasimada Puntland ee Garowe; nuxurka heshiiska ayaa ahaa iskaashi labada dhinac ah, iyo wax-qaybsi.
Shirka wadatashiga Somaliya oo ay garwadeenka ka tahay Qaramada Midoobay ayaa waxaa ka soo qaybgalaya madaxda dawlada federaalka ah, maamulada, ururada siyaasada, iyo bulshada rayadka ah.